Tuesday November 12, 2019 | |
जेठमा नभएको गर्मी असार लाग्दै गर्दा धपक्कै बलेको छ । मानिसलाई मात्र हैन, स्वतन्त्र आकाश र जङ्गलमा विचरण गर्ने प्राणीका लागि पनि गर्मी असह्य बनेको छ ।
सहरतिर विचरण गर्ने चराहरू गर्मी सहन नसकेर नेपालगञ्ज बजारक्षेत्रमा चरा सडकमा खसेर मरेकोे स्थानीय बताउँछन् । “सहरमा चरा खसेर मरेको मैले पनि थाहा पाएँ”, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले थपे, “निकुञ्जभित्र भने हामी गर्मीबाट संरक्षण गर्ने अभियानमा छौँ । ” केही समयअघि डढेलोले वन्यजन्तु तर्साएको थियो । लगत्तै बढेको गर्मीले घनाजङ्गलमा बस्ने वन्यजन्तु होस् वा चराचुरुङ्गी आलसतालस परिरहेका छन् । त्यसक्षेत्रमा यतिबेला ४२ र ४३ डिग्री सेन्टिग्रेडको आसपासमा तापक्रम रहने गरेको छ ।
प्रमुख संरक्षण अधिकृत रेग्मीका अनुसार वन्यजन्तु र पक्षीले हिजोआज मध्य दिउँसो सयर गर्न र आहारा चर्न छाडेका छन् । “चराहरू साँझ, बिहान आहारा खाएर दिउँसो रुख, झाडीको शीतलमा आराम गर्न थालेका छन्,” रेग्मीले भने, “सुक्खा क्षेत्रमा घाँसेमैदानको विकाससँगै पोखरीमा पानी भरेर प्यास मेटाइदिने प्रयास गरिरहेका छौँ । ”
उनका अनुसार यस वर्षमात्र निकुञ्जमा ७५ वटा पोखरी खनिए । जसमा तीन स्थानको प्राकृतिक स्रोतबाट पानी ल्याइएको छ । यसैपाला सञ्चालनमा ल्याइएको सोलार पम्पबाट पनि पोखरीमा पानी भरिएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छिन् ।
सेन्ट्री बसेका विप्लवका कार्यकर्ता नै प्रहरीका ‘सुराकी’
हरीलाई सूचना दिएर दाङको राजापुरबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल…
नेकपाको गुटगत विवाद उत्कर्षमा
ट्रम्पले सोधे – के छ नेपालको खबर ?
सी–विचारधारा : ‘यस्तो सहकार्यले सत्तारुढ दललाई फाइदा भए पनि मुलुक हार्छ’
फोर्ड गाडी बेच्दा जिओ अटोमोबाइल्सले ठगी गरेको पुष्टी, एउटै गाडीमा तीनलाख बढी ठगेको खुलासा
काठमाडौं । केही दिन अघि मात्र, फोर्ड ब्राण्डको इको स्पोर्ट गाडी बेच्दा जिओ अटोमोबाइल्सले उपभोक्ताबाट लाखौं रकम ठगी गरेको तथ्य…
आफ्नै आँगनको सिंहदरबार देख्दैन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, १० करोड स्वाहा तर उस्तै छ स्वरुप
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको तीन बर्ष वित्नै लाग्यो । तर, आफ्नै आँगनमा भूकम्पका कारण भत्किएका यी संरचना तर्फ भने…
तीनकुनेस्थित खाली जग्गा प्रकरण : धुलोमै विलाउँदै करोडौं रकम, कागजमा सिमित डेढ दशक देखिको योजना
काठमाडौं । तीनकुनेमा रहेको सडकभित्रको करिब ३५ रोपनी खाली जमिन धुलाम्य छ । सुस्तरी हावा चल्दा पनि सासै फेर्न गाह्रो…
पर्यटनबोर्ड भित्रको विकृती : यसरी भयो ४ अर्व रकम गोलमाल
काठमाडौं । नियम अनुसार, कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी सार्वजनिक निकायले हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आफ्नो बार्षिक आय व्यवयको विवरण दुरुस्त…
लतिलपुरमा बार्षीक ५० करोड बराबरको विद्युत चोरी
काठमाडौं । हुक गरेर विद्युत चोरी, सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, ललितपुरमा मात्र बार्षीक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत…
राजधानीमै राज्यलाई ठग्दै घरवेटीहरु, घरभाडा करमा अरवौं घोटाला
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा भित्र २ लाख ५० हजार घरधनी छन् । तर, अधिकांश…
यसरी राखिएको छ राजधानीका टोलटोलमा एम्बुस
काठमाडौं । तपाईं एकपल्ट आँखा घुमाएर हेर्नुहोस् त अहिले उपत्यकामा घना बस्तीका बीच बग्रेल्ती पेट्रोलपम्पहरु खुलेका छन् । तर त्यसरी…
बयोधा अस्पतालमा ठगी धन्दा उग्र, पाइला पाइलामा ठगिदै विरामी
काठमाडौं । राजधानीको नाम कहलिएको एउटा अस्पताल । जसले अस्पतालको छतमाथि नै हेलिप्याड बनाएर विरामीको सेवा गरको दाबी गरिरहेको छ…
ड्रग्स जस्तै घातक बन्दै स्मार्टफोन, स्कुले बालबालीकामा बढ्दो असर
काठमाडौं । के तपाईंको बालबच्चा सँधैजसो स्मार्टफोनमै झुम्मीरहन्छन् ? अथवा स्मार्टफोनका लागि झगडा गरिरहन्छन् ? यदी त्यसो हो भने साबधान…